Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.2 Human computation
Human computation tetikasa maka olana lehibe; handrava izany ho tsotra farantsa; haniraka azy ireo mpiasa maro; ary avy eo dia aggregate ny vokatra.
Human computation tetikasa mitambatra ny ezaka ataon'ny olona maro miasa amin'ny micro-asa tsotra, mba hamahana ny olana izay takatry ny lehibe ho an'ny olona iray. Mety manana olana fikarohana tsara ho an'ny olombelona computation raha nieritreritra ve ianao: I afaka mamaha ity olana ity raha nanana arivo fikarohana mpanampy.
Ny prototypical ohatra ny olombelona computation tetikasa dia Galaxy Zoo, izay hamaritra aho tamin'ny an-tsipiriany eto ambany. Ao amin'ity tetikasa ity, maherin'ny 100.000 mpiasa an-tsitrapo voasokajy sary ny tokony ho 1.000.000 vahindanitra toy izany koa araka ny marina ho aloha, ary betsaka kely-ezaka amin'ny astronoma matihanina. Zavatra tsy nitombo ambaratonga nomen'ny faobe fiaraha-miasa hitarika ny baovao hitan'ny mpahay siansa momba ny vahindanitra mitambatra, dia avadika ho tanteraka ny vahindanitra kilasy vaovao antsoina hoe "Maitso pitipoà."
Na dia Galaxy Zoo toa lavitra ny fikarohana ara-tsosialy, dia misy toe-javatra maro raha ny marina ny mpikaroka ara-tsosialy izay te-kaody, manasokajy, na marika sary, na andinin-teny. Amin'ny toe-javatra sasany, fanadihadiana io azo atao amin'ny alalan'ny ordinatera, fa mbola misy endrika fanadihadiana sasany izay sarotra ho an'ny ordinatera, fa mora ho an'ny olona. Tsy mora izany-fa-olona mbola mafy-for-solosaina micro-asa fa afaka mitodika eo olombelona tetikasa computation.
Tsy vitan'ny no kiritika anjaranareo tamin'ny Galaxy Zoo tena ankapobeny, ny firafitry ny tetikasa dia ankapobeny ihany koa. Galaxy Zoo, sy ny olombelona hafa computation tetikasa, mampiasa mivaky-hampihatra-manambatra ny tetika (Wickham 2011) , ary indray mandeha azonareo izany tetika ianao ho afaka hampiasa izany mba hamaha olana maro. Voalohany, lehibe Nizara roa ny olana dia maro ny olana kely chunks. Avy eo, dia ampiharina ny asa olombelona tsirairay chunk olana kely, tsy miankina amin'ny hafa chunks. Farany, ny vokatry ny asa ity dia mitambatra hamokatra ny marimaritra iraisana vahaolana. Noho izany fototra, dia aoka hojerentsika ny fomba ny fisarahana-mampihatra-manambatra ny tetika nampiasaina tao Galaxy Zoo.